ပြည်တွင်းတွင် ရောင်းချရန် တိုယိုတာဘယ်တာများ | တိုယိုတာဘယ်တာကားဈေးများ Carmudi Myanmar [Burma]
Pearl White Toyota Belta 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလြုံ...
Silver Toyota Belta 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှ...
Pearl white Toyota Belta 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်...
Light blue Toyota Belta 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်မ...
Blue Toyota Belta 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစ...
Silver Toyota Belta 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်...
Red Toyota Belta 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်...
Silver Toyota Belta 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှ...
Silver Toyota Belta 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ...
Black Toyota Belta 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပ...
Silver Toyota Belta 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ...
Pearl White Toyota Belta 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလြုံ...
Blue Toyota Belta 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစ...
Pearl Gold Toyota Belta 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြ...
Silver Toyota Belta X 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ...
Black Toyota Belta 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှု...
Pearl White Toyota Belta 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလြုံ...
White Toyota Belta 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပ...
အိမ်စီး ဆလွန် အရောင်းသွက် ဖြစ်တဲ့ တိုယိုတာ ဘယ်တာ များ
တိုယိုတာဘယ်တာ တွေဟာ ဆီဒန်ကား အမျိုးအစားထဲမှာ ပါဝင်ပေမဲ့ အနည်းငယ် ကိုယ်ထည် သေးငယ်ကြပါတယ်။ မကြာသေးသော နှစ်များကမှာ ထွက်ရှိလာတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံ ထုတ်ကားများ ဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းမှာတော့ လူစီးများတာ ကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဂျင် ဆီစား သက်သာမှု၊ အရွယ်အစား အဆင်ပြေမှု ၊ ဈေးနှုန်း သင့်တင့်မှု၊ စွမ်းဆောင်ရည် ကောင်းမွန်မှု တို့ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ တိုယိုတာ ဘယ်တာကို မြောက်အမေရိက နဲ့ ဂျပန်မှာ ဘယ်တာ နာမည်ဖြင့် သိကြပြီး တစ်ခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ တိုယိုတာ ရာရစ်၊ တိုယိုတာ ဗီအိုစ် စတဲ့နာမည်တွေနဲ့ သိကြပါတယ်။ ဂျပန်မှာ ဘယ်တာတွေကို ၂၀၀၅ နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်က စတင်ရောင်းချခဲ့ပြီး ပို့ကုန်အနေနဲ့ ၂၀၀၆ မှာ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ဌင်းရဲ့ ထုတ်တဲ့ နှစ်ကလည်း ၂၀၀၅ ကနေ စပြီး ယခုရောက်ရှိနေတဲ့ နှစ်အထိ ဖြစ်ပါတယ်။ စစချင်းရောင်းချခဲ့တဲ့ ဘယ်တာတွေရဲ့ အင်ဂျင်ကတော့ ၁၀၀၀ စီစီနဲ့ ၁၃၀၀ စီစီ မှာ ဖြစ်ပြီး ယခုအနေဖြင့် တစ်ခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ ဈေးကွက်တွေမှာတော့ ၁၅၀၀ စီစီတွေကို ရရှိနိုင်မှာပါ။
ဂျပန်မှလွဲပြီး ကျန်တဲ့ အာရှနိုင်ငံတွေအတွက် ဘယ်တာကို တိုယိုတာ ဗီအိုဒ် အနေဖြင့် ရောင်းချပြီး ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ပစ္စည်းတွေကို တပ်ဆင်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ အမေရိကန်နဲ့ ဂျပန်စတဲ့ မားကတ်တွေ အတွက်ကတော့ ဂျပန်မှာပဲ တပ်ဆင်တည်ဆောက်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းက ဘယ်တာတွေကတော့ ဂျပန်က လာတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဂျပန်ကား စစ်စစ် တွေ ဖြစ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်တာတွေဟာ တွေ့နေကြ ဆီဒန်တွေလို ရှည်ရှည်မျောမျော ရှိတဲ့ ကားဘော်နက်နဲ့ နောက်မြီးတို့ကို တွေ့ရမှာ မဟုတ်ပဲ ပုံမှန် ဆီဒန်တွေထက် အနည်းငယ် ကိုယ်ထည် ရှေ့အနောက် ရဲ့ အရှည် တိုနေတာကို သိနိုင်ပါတယ်။ ဆိုဒ်ကတော့ မျက်စိထဲ မှတ်ရလွယ်တဲ့ ပုံစံရှိတဲ့ ဆိုဒ်နဲ့ ဒီဇိုင်းရှိနေပါတယ်။
ကားရဲ့ အင်ဂျင်မှာ အမျိုးအစားကွဲအနေနဲ့ (၃) မျိုးတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြင်းကောင်ရည် ၇၁ ထုတ်နိုင်တဲ့ ၁၀၀၀ စီစီ၊ မြင်းကောင်ရည် ၈၄ ထုတ်နိုင်တဲ့ ၁၃၀၀ စီစီ အင်ဂျင်၊ ၁၀၉ မြင်းကောင်ရည် အားထုတ်နိုင်တဲ့ ၁၅၀၀ စီစီ အင်ဂျင်တို့ကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နည်းပညာပိုင်းအနေနဲ့ လေအိတ်များ ပါဝင်ပြီး ထိုင်ခုံ ခါးပတ် ပတ်မှု၊ မပတ်မှုကို အာရုံခံနိုင်တဲ့ ဆင်ဆာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ဘေးဖက် လေအိတ်တွေ၊ ဘေးဖက် လိုက်ကာလေးအိတ်တွေကအစ ပါဝင်ပြီး အော်တိုဘ၇ိတ်စနစ် များကို ၂၀၀၇ နဲ့ ၂၀၀၈ မော်ဒယ်ရှိ ကားများတွင် ပုံမှန် အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုအနေနဲ့ ပါဝင်ပါတယ်။ ၂၀၀၉ မော်ဒယ်တွေမှာတော့ အန်တီ ဘရိတ် စနစ်တွေပါ ပါဝင်လာပြီး တည်ငြိမ်စေတဲ့ ထိန်းချုပ်မှု Stability control တွေကတော့ ၂၀၁၀ မှ စံနှုန်း တစ်ခု နဲ့ ရရှိပါတယ်။
ဆီဒန်ပုံစံကို အသေးစား ဒီဇိုင်းဆွဲခဲ့တဲ့ ဘယ်တာတွေဟာ လူငါးယောက်စီးကားတွေ ဖြစ်ပြီး အတွင်းမှာ နေရာက အရမ်းကြီး မကျယ်ပေမဲ့ အရမ်းကြီးလည်း မကျဉ်းပါဘူး။ လူငါးယောက်စာကို သက်တောင့်သက်သာစွာ ဖြစ် ထိုင်နိုင်အောင် လုံလောက်တဲ့ နေရာ ရှိပါတယ်။ ဘယ်တာကားတွေက ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ဘယ်တာမှန်းသိအောင် ထင်ရှားတဲ့ ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၇၊ ၂၀၀၈ မော်ဒယ် ကားတွေနဲု့ ၂၀၀၉၊ ၂၀၁၀ မော်ဒယ်ကားတွေမှာ အနည်းငယ်ကွာသွားတာ ရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ အရှေ့ ဘောနက်ဖုံးရှေ့က လည်ရစ်တွေ အနည်းငယ်ပြောင်းလဲ သွားခြင်းပါ။ အတွင်းခန်းကလည်း ကားတီဗီအောက်က လေအေးပေးစက် ခလုတ်တွေ ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ ကျန်တာတော့ သိပ်ကြီး ပြောင်းလဲတာတွေ သိပ်မရှိပါဘူး။ ဒတ်ရ်ှဘုတ်တွေကတော့ ရှင်းလင်း ကောင်းမွန်စွာ တွေ့မြင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်တာတွေမှာ အမြင့်ဆုံး ဂရိတ်လိုပြောနိုင်တဲ့ G ဂရိတ်မှာကတော့ အွန်ရီဂျင်နယ် တီဗီ၊ ဘတ် ကင်မရာ၊ ဒီဂျစ်တယ် အဲယာကွန်း၊ ပတ်ရှ် စတန်၊ စမတ်ကီး၊ အလွိုင်းဝှီး စတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘေးဖက် လေအိတ်တွေကိုလည်း တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခြား အခြေခံ အစိတ်အပိုင်းတွေအနေနဲ့ ပါဝါ လောခ့်၊ ပါဝါ စတီယာရင်၊ ပါဝါ ၀င်းဒိုး၊ အသံပိုင်းစနစ်အတွက် ရိုးရိုးမော်ဒယ်တွေမှာ စီဒီ ပလေးရာတွေပါ ပါဝင်ပါတယ်။
ဘယ်တာတွေဟာ ၁၃၀၀ စီစီကားတွေဖြစ်ပြီး စလစ်မလိုပဲ အလွယ်တကူ ဈေးသက်သက်သာသာ သွင်းယူ ၀ယ်ယူ စီးနင်နိုင်ပါတယ်။ လူဦးယောက်ကို စီးနင်းနိုင်ပြီး အနောက်က ပစ္စည်းတင်နိုင်ရုံသာမက ဒီဇိုင်း လှပတဲ့ ဆလွန်လေးတွေ ဖြစ်နေတာကြောင့် လူစီးများပါတယ်။ အရောင်အသွေးမျိုးစုံ၊ နဲ့ အတွင်း အစိတ်အပိုင်း စုံစုံလင်လင် ရရှိနိုင်တဲ့ ဘယ်တာ ကားများ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၃၀၀ စီစီတွေ ဖြစ်တဲ့ ဘယ်တာများကို ပြည်တွင်း ၀ယ်လိုအား တစ်ခုအနေနဲ့ ၂၀၀၇ နဲ့ ၂၀၁၁ ခုနှစ်လောက်တွေမှာ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး ဈေးနှုန်းကတော့ ကျပ်သိန်း ၁၁၀ ကနေ ၁၅၀ သိန်းလောက်ထိ အစားအစား ရှိပါတယ်။ တိုယိုတာ ဘယ်တာ G ဂရိတ်တွေက ပွတ်ရ်ှစတပ် ( သော့မလို အင်ဂျင် စတင် နိုးနိုင် တဲ့ ခလုတ်) ပါရှိပြီး အစိတ်အပိုင်း တီဗီတွေက အစ အစုံအလင် ပါရှိတာမို့ ဈေးပိုကြီးပါတယ်။ လတ်တလော အနေနဲ့ ဘယ်တာတွေကို ဂျပန်လေလံနဲ့ ကားရှိုးရွန်တွေက တစ်ဆင့် အဆင်ပြေစွာ ၀ယ်ယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။